January 2018 – NMDC
အမှတ် (၂၇၃/၂၇၉)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၀၁-၂၉၂၅၆၆ , ၀၁-၂၉၉၀၈၈ , ၀၁-၂၀ဝ၆၃၉
သင်ရိုးညွှန်းတမ်း နှင့် အရည်အသွေးအာမခံချက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန
ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဧည့်ဝန် ဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု အတတ်ပညာ
(English) B.A (Tourism) First Batch Graduation Dinner at Lotte Hotel
Monday January 29th, 2018 By PlanetCreator Uncategorized Comments Off
NCRC Hall ၌ပြုလုပ်သော e-Library နှင့်ပတ်သက်သည့် ဟောပြောပွဲ
(၁၁-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့ NCRC Hall ၌ပြုလုပ်သော e-Library နှင့်ပတ်သက်သည့် ဟောပြောပွဲ၌ Introduction to e-Resource (e-Library) အကြောင်း ဒေါ်မြတ်စန်းငြိမ်းမှ ဟောပြောခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ စာကြည့်တိုက် ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ တက်ရောက်ခဲ့မှုအား မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
Thursday January 11th, 2018 By PlanetCreator Uncategorized Comments Off
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၌ (၃-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သည့် အနှစ်(၇၀)ပြည့်လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အားကစားပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော ဆရာ၊ဆရာမများ၊ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းဝန်ထမ်းများနှင့် အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ ဆရာ၊ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများအား မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
Wednesday January 3rd, 2018 By PlanetCreator Uncategorized Comments Off
ပထမအကြိမ် နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း စာမူရှင်ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနား
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် NCRC Hall တွင် (၂-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့၌ “ပထမအကြိမ် နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း စာမူရှင်ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနား” ကိုကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာတင်တင်ထွေးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး စာမူရှင်များအား ဂုဏ်ပြုဆုများချီးမြှင့်ပေးအပ်ပါသည်။ မဂ္ဂဇင်းတွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်များ၊စာမူရှင်များနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်းအနားအပြီးတွင် မဂ္ဂဇင်းကော်မတီ၊ ကုမ္ပဏီများမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် စာမူရှင်များ စုပေါင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ မဂ္ဂဇင်းကော်မတီနှင့် စာမူရှင်များ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပါသည်။ မဂ္ဂဇင်းကော်မတီနှင့် စာမူရှင်များ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပါသည်။ မဂ္ဂဇင်းကော်မတီနှင့် ကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပါသည်။
Tuesday January 2nd, 2018 By PlanetCreator Uncategorized Comments Off
© Copyright 2017 by NMDC. All Rights Reserved. Designed by World Wide Myanmar